Tambanivohitra Lasa Tompon-daka Manerantany Amin’ny Hazakazaka: Tantaran’i Mira Rai Avy Ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2015 7:20 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, বাংলা, Ελληνικά, Español, čeština , Català, 日本語, မြန်မာ, English
Tsy sahaza hoan'ny rehetra ny hazakaza-davitra anatin'ny natiora (trail running), iray amin'ireo fanatanjahan-tena sarotra sy mandreraka. Na izany aza, toa mandeha hoazy izany hoan'i Mira Rai avy ao Nepal. Nandresy vao haingana tamin'ny fifaninanana hazakazaka 80 kilaometatra tao Mont-Blanc, iray amin'ireo sokajiana ho hazakazaka sarotra sy ara-teknika indrindra any Frantsa izy, nahavita ny halaviran-dalana tao anatin'ny 12 ora sy 32 minitra.
Ivelan'i Nepal, nanomboka ny fandreseny miezinezina tamin'ny Hazakaza-davitra Sellaronda (57 km) sy Trail Degli Eroi (83 km) tao Italia tamin'ny Septambra 2014 izy.
Miatrika ireo fakantsary miandry azy i Mira Rai @TrailRunNepal taorian'ny fandreseny tamin'ny hazakazaka @Skyrunning_com HK 50km
Hoy izy tamin'ny iray tamin'ireo antsafa nifanaovana:
Manao fanazaran-tena mafy izy izay mahatonga azy ho salama sy matanjaka. Anisan'ny mahazatra azy ny mifoha maraina be, mihazakazaka 10-12 kilometatra amin'ny maraina ary 10-12 kilometatra amin'ny hariva. Mihanika vatolampy sy mitondra bisikileta ihany koa izy.
Manome aingam-panahy hoan'ireo te-ho mpihazakazaka lavitr'ezaka hiringiriny i Mira, nametraka ny anarany tamin'ny sehatry ny hazakazaka lavitr'ezaka. Ary tsy adino ireo ankizilahy sy ankizivavy an-tapitrisany ao Nepal izay voajanahary ho azy ireo ny miaka-midina amin'ny lalana mideza amin'ny havoana mibaby entana.